La kulan: 9 jirkii ugu horreeyey ee Shahaado Jaamacadeed qaadanaya! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / La kulan: 9 jirkii ugu horreeyey ee Shahaado Jaamacadeed qaadanaya!
Posted by: Mahad Mohamed November 30, 2019
Himilo- Marka uu ku dhex jiro ilmaha qeyrkiisa ah, Laurent Simon waa 9 jir iska caadi ah. Wuxuu sida carruurta kale ciyaartaa fiidiyow game-ka, laakiin marka ay timaadowax-barashada wuxuu kuwa ka da’ weyn ku ridaa xishood – fahamkiisa xeesha dheer awgiis.
Hadda wuxuu ka qalin-jebinayaa Jaamacadda isaga oo 10 jir gaarin.
Bisha December ee soo aadan ayuu wiilkan u dhashay Biljamka wuxuu ka qalin-jebinayaa Jaamacadda Eindhoven ee dalka Holland. Wuxuu marqaatiga ka qaadan doonaa kasmada injineeriyadda korontada. Dadka intooda badan waxay ku qaadataa saddex sano inay kaga qalin-jebiyaan. Laakiin Simon wuxuu galay sannadkii hore, muddo 10 bilood gudaheed ahna wuxuu ku qaadanayaa shahaadada.
Hibadiisa xad-dhaafka leh ee aqriska iyo cilmi-baarista ayaa u sahashay inuu si fudud ku qeybo dhammaan casharadda loogu tala-galay manhajka jaamacadda.
Waalidka Laurenta ayaa sheegay in da’diisa hore ee if usoo baxa ay fahmeen hibadiisa rabbaaniga, balse aysan il dheer kusii eegan.
Markii uu ku jiray dusgiga hoose waxaa la arkay tayada hal-qabadkiisa maskax ahaaneed. Waxaana taasi ay soo jiidatay dareenka barayaasha kuwaas oo dhugmadii loo baahnaa u fidiyay. Laurent wuxuu sheegay in marka uu kasoo jeesto barashada injineeriyada uu doonayo inuu mar kale iska diiwaan-geliyo kulliyadda caafimaadka
Previous: Nemanja Matic oo ka baxay tababarka kooxda Man United
Next: Jamie Bowden oo ku dhaw in uu heshiis cusub u saxiixo Tottenham
La kulan- Gabadha gacmaha la’ ee hoggaamisa da’yarta ciidamada Mareykanka